Habka loo baaro of permeability uumiga biyaha ee bacaha caafimaad bacaha Medical miisaanka iftiin ay, xoog sare, quwad wanaagsan iyo cadaadiska iyo faa'iidooyinka kale, waxaa si tartiib ah bedelay dhalooyin caafimaad, waxaa si balaadhan looga isticmaalaa in daawada adag afka iyo dareere category baakada daawada. Wate ...
Sidee nuts, wuu hayn? Gaar ahaan koonfurta ee cimilada qoyan, bacda furay, xiritaanka waa mid aad u fudud oo aad u fudud dib u hir, nuts iyo huurka si fudud isku wada dheggan yihiin, markan in ay ku riday nuts galay maalintii qoraxda, waa in ay ku cimilada waa mid aad u wanaagsan, heerkulka sare ...
Production of bacaha bariiska model bixiyo waxa dareenka?
Waa maxay nooca macluumaadka waa in lagu daraa ee bacaha bariiska ku haboon heerka qaran? dhibcood qorshaynta bacaha Rice meesha uu hada yahay dalka on warshadaha cuntada waa mid aad u culus, waxaan si dabiici ah ku bixin doonaan fiiro gaar ah. Waxaan leenahay macluumaad dheeraad ah oo caadi ah ee baakada of bacaha vacuum bariis inclu ...
Siinta back to bulshada waa fikradda ah in SMEs badan gudaha ayaa u hoggaansanaayeen. On May 15, 2018, hoos imaanaya hoggaanka Agaasimaha Xafiiska Ganacsiga ee Wei mici xayawaan City iyo madaxda Xiashan Science Degmada iyo Technology Bureau, oo ah agaasimaha fulinta ee Xiriirka -...
Production of model bacaha bariiska bixiyo ...